नेपालगञ्जबाट आएको यति एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना , १ जना घाइते ! - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालगञ्जबाट आएको यति एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना , १ जना घाइते !
नेपालगञ्जबाट आएको यति एयरलाइन्सको बिमान दुर्घटना , १ जना घाइते !
काठमाडौं : यति एयरलाइन्सको विमान अवतरणको क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धवनमार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको छ । नेपालगञ्जबाट आएको यति एयरलाइन्सको ए टी आर ७२ विमान अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएको बताइएको छ ।दुर्घटनामा १ जना घाइते भएको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्य यात्रु भने सकुशल रहेका छन् ।
धावनमार्गमा जहाज चिप्लिएपछि अहिले विमानस्थलमा उडान र अवतरण बन्द भएको छ।घाइतेको केएमसी अस्पताल सिनामंगलमा उपचार भैरहेको छ । अरु यात्रु सुरक्षित रहेको र उनीहरुलाई जहाजबाट बाहिर निकालिसकिएको पनि विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
भविष्यको लागि यी १५ कुराहरु बुझिराख्नुहोला ! तपाइको जीवन सफल अनि खुशी हुनेछ !!
– आफ्नो स्वयमको स्थान मा रहनुस ताकी स्वतन्त्र जीवन जिउनुको आनन्द उठाउन सकियोस ।
– आफ्नो बैक ब्यालेन्स र भौतिक सम्पत्तीलाई आफ्नो साथ मा राख्नुस , कसैको बहकाब र प्रेम मा परेर आफ्नो सम्पत्ती अरुको नाम मा नगर्नुस ।
– आफ्नो बच्चाहरुको यो भरोसामा निर्भर नहुनुस कि उनिहरुले तपाइलाई सेवा गर्छ । किनकी समय बदल्ना साथ उनिहरुको प्राथमिकता पनि बदलिन्छ , र कहिलेकाही त चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेको हुदैन ।
– ती मान्छेहरुलाई आफ्नो मित्रतामा सामेल राख्नुस जसले तपाइलाई खुशी देख्न चाहन्छ यानिकी तपाइको हितैषी ।
– कसैसित पनि आफ्नो तुलना नगर्नुस र कसैसित कुनै आशा नराख्नुस ।
– आफ्नो सन्तानहरुको जिन्दगीमा दखलअन्दाजी नगर्नुस , उनिहरुलाई आफ्नो तरीकालाई आफ्नो जिन्दगी जिउन दिनुस , र तपाईं आफ्नो तरीकाले आफ्नो जिन्दगी जिउनुस ।
– वृद्धअवस्थामा आधार बनाएर कसैसित सेवा गराउने र सम्मान पाउने प्रयास कहिल्यै नगर्नुस ।
– मानिसहरुको कुरा सुन्नुस तर आफ्नो स्वतन्त्र विचारले निर्णय लिनुस ।
– प्रार्थना गर्नुस तर भिख नमाग्नुस , यहासम्म कि भगवान सित पनि नमाग्नुस , भगवान सित माग्नुछ भने माफी र हिम्मत माग्नुस ।
– आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुस , उमेर को साथ मा सानोतिनो समस्या आइरहन्छ , पौष्टिक आहार र सन्तुलित भोजन खानुस ।
– आफ्नो जिवनलाई उमङ्गमय जीवन जिउने प्रयास गर्नुस , सबैलाई खुशी बाड्नुस ।
– जिवनमा स्थायी केही पनि छैन चिन्ता पनि छैन यो कुरालाई याद राख्नुस ।
– आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारीलाई रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा पहिले पूरा गर्नुस ,याद जबसम्म तपाईं आफ्नो लागि जिउन शुरु गर्नुहुन्न तबसम्म जिबित हुनुहुन्न ।